Isivinini Esinciphisa & Umakhi Webhokisi Legiya, Umhlinzeki, Ifektri - izinciphisi, izinciphisi zezikelemu, amabhokisi ama-worm, amabhokisi wamagiya aseplanethi, izinciphisi zejubane, okuguquguqukayo, amagiya asindayo, amagiya wentsimbi ye-sprial, ama-gearbox ezolimo, amagiya kagandaganda, amagiya weloli, ibhokisi lamagiya lesibungu
0086-571-88220971 [i-imeyili ivikelwe]
Isinciphisi Esisheshayo neGearbox
Ukubuyela emuva okuphansi kwesigcawu se-servo worm
Ukuhluka kwejubane le-UDL
Ama-cycloidal gear reducers
Ibhokisi legiya lemishini yezolimo
Amabhokisi wamagiya aseplanethi
Ama-motors alungiselelwe i-Helical
Ama-motors womoya we-spiral bevel
Ama-gearbox wama-tracors nokuzenzakalelayo
Izinciphisi ezikhethekile namabhokisi wamagiye
Abasebenza ngeWorm & Bevel Gear
Ama-motors amancane we-DC amancane
Ukunciphisa kwe-SMR Shaft
Izingxenye zamagiya ne-PTO Shaft nabanye
Amagiya endandatho ye-Helical
Imiphini ye-Spline nemiphini yamagiye
Spur amagiya & amagiya helical
Amagiya ezikelemu nezikelemu
Amagiya wotho & amagiya wensimbi angabibikho
Amagiya amaphampu kawoyela
Indandatho ye-Slewing / i-Slewing Bearing
Electric Drive & umfutholuketshezi Drayivu
Umfutholuketshezi drive uhlelo
Izinjini zochungechunge ze-Y2
Izinjini eziwuchungechunge ze-Y
YD uchungechunge multi-speed izinjini
Izinjini zochungechunge lwe-YS
Ama-motors ochungechunge lwe-YC YL
TYGZ izinjini ezivumelanisiwe
Izinjini ezihambisanayo ze-TYBZ
Ama-brush brush dc motors
Ama-Rare-Earth-Permanent-Magnet motors (REPM MOTORS)
Izinciphisi zejubane izitimela zamagiya phakathi kwemoto nocezu lwemishini. Inhloso yesinciphisi sejubane ukunciphisa i-rpm edluliswa phakathi kwalezi zindawo ezimbili zokuphela. Izinciphisi zejubane zithatha i-torque kudalwe yimoto (okokufaka) bese uyakwandisa. Okwesibili, izinciphisi zejubane, njengoba negama lisho, ukunciphisa ijubane (okukhipha i-rpm) kokufakwayo ukuze umphumela ube yijubane elifanele.
Igama elithi "gearbox" limane nje lisho igama elijwayelekile lesitimela segiya phakathi kwemoto nocezu lwemishini. Ngakho-ke, bonke abanciphisa isivinini bangama-gearbox.
Kodwa-ke, akuwona wonke amabhokisi wamagiya anciphisa ijubane lokufaka. Yize kungajwayelekile, amabhokisi wamagiya angashaywa ngempela ukukhuphula ijubane lokufaka. Uhlobo oluvame kakhulu lwamabhokisi wamagiya ngamanciphisi wejubane, kepha bekungeke kube kulungile ukusho ukuthi wonke amabhokisi wamagiya anganciphisa ijubane.
Izinciphisi zejubane lomsundu
WJ UCHUNGECHUNGE WORM REDUCER
Izinciphisi ezikhethekile zeGreenhouse
Izinciphisi zesibungu Inch Dimension Series UY
Izinciphisi ze-Worm Inch Dimension Wpa
Izinciphisi ze-Worm Inch Dimension wps
Izinciphisi ze-Worm Inch Dimension wpx
Izinciphisi ze-Worm Inch Dimension WPDA
Izinciphisi ze-Worm Inch Dimension WPDS
Izinciphisi ze-Worm Inch Dimension WPDX
Kungani ukhethe us?
(1) Sinikeza ngezinsizakalo ze-OEM futhi sihambisa izitayela ezahlukahlukene nemiklamo yakamuva kumakhasimende;
(2) Siyabambisana namakhasimende amakhulu eNingizimu-mpumalanga ye-Asia, e-Afrika, eMpumalanga Ephakathi, eNyakatho Melika naseNingizimu Melika;
(3) Ngokuya ngezidingo zamakhasimende ezifundeni ezahlukahlukene, sihambisane nezitayela ezahlukahlukene zokunciphisela wena, ukuze amakhasimende ethu abe nokuncintisana okukhulu emakethe!
(4) Sineminyaka engaphezu kwengu-20 yokuhlangenwe nakho okucebile ekunikezeni amakhasimende imikhiqizo esezingeni eliphakeme kanye nezinsizakalo eziqeqeshiwe kakhulu!
(5) Singathumela kalula izinto kusuka kunoma yiliphi itheku eChina! Wamukelekile ukubuza!
1. Umthamo omkhulu wokukhiqiza nokulethwa okusheshayo.
2. Imithetho eqinile yokuhlolwa kokulawulwa kwekhwalithi: yonke imikhiqizo kufanele idlule ukuhlolwa okungu-100% ngaphambi kokulethwa.
3. Nikeza insizakalo ye-OEM / ODM
4. Insizakalo ye-inthanethi yamahora angama-24.
5. Umbuzo wesilinganiso sangempela sesikhathi
6. Ikhwalithi ephezulu, ukuthembeka okuphezulu kanye nempilo yomkhiqizo omude.
7. Abakhiqizi abangochwepheshe bahlinzeka ngamanani ancintisanayo.
8. Abasebenzi abanamakhono ahlukahlukene, abanolwazi.
Uhlelo lokuphathwa kwekhwalithi:
Ku-HZPT, ikhwalithi yomkhiqizo nensizakalo inikezwa kuqala kakhulu.
Abasebenzi bethu bathola ukuqeqeshwa ngezindlela nezimiso ezisezingeni.
Kuwo wonke amazinga enhlangano, sizibophezele ekwenzeni ngcono ikhwalithi yomkhiqizo nezinqubo.
Ukuzibophezela okujule kangaka kusisizile ukuheha ukwethenjwa kwamakhasimende futhi saba uphawu lomhlaba oluthandwa kakhulu.
Iphakheji nesikhathi sokuhola
Ngokhuni Case / Isitsha kanye Pallet, noma njengoba ngamunye Ukucaciswa ngezifiso.
Amasampula we-15-25days. Izinsuku ezingama-30-45 zezinsuku ezingekho emthethweni
Port: Shanghai / Ningbo imbobo
Ingabe ukuthenga kusuka eChina kunenzuzo?
I-China isalokhu ingabaphakeli abakhulu emhlabeni. Ngokuqinisekile imikhiqizo oyikhethile inenzuzo ezimakethe zakho ezihlosiwe, njengoba iChina ihlinzeka umhlaba ngekhwalithi yokuncintisana namanani entengo.
2) Ngabe ngidinga ukuhamba iChina ukuze ngithenge imikhiqizo?
Sikunakekela konke, ngakho-ke ungonga izindleko zokugibela indiza, amahhotela nezindleko zokuhamba. Kodwa-ke, uma uthatha isinqumo sokuvakashela eChina, sizozama ukukuhlelela ukuhlala okuhle ukuze ulwazi lwakho lokuhamba lube mnandi.
3) Hlobo luni lwemikhiqizo oyinikezayo?
Izinhlobo ezahlukahlukene zemikhiqizo yezimboni, yezimoto neyezolimo. Yonke imikhiqizo inikezwa iqembu elikhethekile.
I-4) Yiziphi izingcuphe zami ngokuthenga kusuka eChina noma ukusebenza nawe?
Awunazo izingozi ngokuyisisekelo. Siyakuthengela futhi ungaqiniseka ngokuhlolwa kwethu. Uma uthola isikhathi sokuza China, ungasivakashela ngesikhathi senqubo yokukhiqiza. Ungakwazi ukufinyelela kumanethiwekhi wethu wokuxhumana nethimba lokuthengisa. Sizothatha izinyathelo ezinqala mayelana nemikhiqizo yakho efana neyethu. Awudingi ukuhamba uma ungafuni njengoba unabalingani abanolwazi eChina.
5) Ngingazitholela umphakeli wemikhiqizo yami ngedwa, kungani ngikudinga?
Ungase wenze kanjalo. Noma kunjalo, utshalomali lwakho luzobe luphakeme kakhulu. Futhi awunaye umlingani wasendaweni owazi imakethe futhi ongakunika ukufinyelela kwinethiwekhi yamathuba.
Ukuthenga imikhiqizo yakho kusuka eChina, udinga ukuthi ube nehhovisi lasendaweni lokusayina inkontileka nabahlinzeki, ithimba lonjiniyela ukuze wenze ikhwalithi nokuhlolwa kobuningi ngezikhathi ezithile. Udinga ukwazi ngemithombo yempahla eluhlaza, futhi udaba olubalulekile ukugwema noma yikuphi ukutholwa kokukhishwa.
6) Wakheke kanjani?
Sineminyango ehlukene ngamunye okhethekile kuyo yonke imikhakha. Singanikeza ngosizo lwezinto, usizo lokuhluza, usizo lokuhlola, nosizo lwezomthetho.
7) Ingabe le nsizakalo yenzelwa inkampani enkulu kuphela?
Cha, siqinisekile ukuthi ngesikhathi sokuqala inkampani izothola ukuzethemba okufudumele kokugcina ibhizinisi lakho likithi, njengobudlelwano bethu obususelwa ekwethembekeni nasezinzuzweni zombili, ngakho ngokuzayo uzokwandisa ibhizinisi lakho. Siyakukhathalela futhi sikwenza ube namandla kakhulu kunakuqala. Ukuhamba ngamandla kuya ndawonye.
Samukela noma iyiphi inhlangano kusuka Encane kuya Kakhulu, Masithuthuke. . .
Ngeminye imibuzo sicela usithumelele i-imeyili
Ucingo: 0086-571-88220971 / 3
Umkhiqizi we: I-air compressor, isinciphisi sokubuyela emuva esiphansi, isinciphisi sejubane, izinciphisi zezikelemu, amabhokisi ama-worm, amabhokisi wamaplanethi, izinciphisi ze-worm, i-variator, i-helical gear, i-gearbox yamaplanethi, amagiya womoya ovunguza, ama-gearbox ezolimo, amagiya kagandaganda, amagiya weloli amandla okuhambisa amandla szp-group
Isixhumanisi: Imiphini ye-PTO Trlink Driveline Drive Shafts
3 Izinto Ezibalulekile Okufanele Uzazi Ngokwehlisa Ijubane
Isixhumanisi esijwayelekile sokuxhuma se-ANSI chungechunge
I ngokunemba steel roller chain
UKHUNGO LWENTSIMBI OLUNZIMA
Copyright 2008 Wonke amalungelo agodliwe. China-reducers.com